Kooxda Shabaab oo ka hadashay sababta ay u weerareen Xaruunta Wasaarada Shaqada. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kooxda Shabaab oo ka hadashay sababta ay u weerareen Xaruunta Wasaarada Shaqada.
Kooxda Shabaab oo ka hadashay sababta ay u weerareen Xaruunta Wasaarada Shaqada.
Afhayeenka howlgalada Al Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab ayaa ka hadlay sababtii shalay dagaalyahano katirsan Al Shabaab u weerareen xarunta Wasaarada Shaqada iyo Arimaha bulshada Soomaaliya.
Abuu Muscab ayaa sheegay in Wasaarada shaqada ay qoreysay ciidamo gaar ah oo loogu tala galay in ay la dagaalamaan Al Shabaab, waxa uu sidoo kale sheegay in xarunta lagu qorayay ciidamo dhar cad ah oo wax basaasa .
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada dharcadka ah ee Wasaarada Shaqada iyo Arimaha bulshada lagu qorayay loogu tala galay in ay basaasaan culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo dadka fikrad ahaan kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Afhayeenka howlagalada Al Shababa in weerarka lagu qaaday xarunta Wasaarada lagu dilay 15-qof ay ku jiraan masuuliyiin xilal ka haya dowlada sidoo kale lagu dhaawacay 26-qof oo kale.
Weerarkii shalay Al Shabaab ku qaadeen xarunta Wasaarada Shaqada iyo Arimaha bulshada ayaa dadkii lagu dilay waxaa kamid ahaa Wasiir kuxigeenkii Wasaarada Shaqada Arimaha bulshada sidoo kale ahaa xildhibaan katirsanaa Baarlamaanka Federaalka.
Wasiir Ka Tirsanaa Puntland Oo Ka Badbaaday Qaraxii Ka Dhacay Boosaaso
MADAXWEYNE KU-XIGEENKA SOMALILAND OO DHAGAX DHIGAY WERSHAD SIFAYN DOONTA BAATROOLKA OO...